Tsigira FAQ ⚙️ | ThatsLuck.com
►Ini ndaodhaunirodha software, asi handikwanise kushandisa zvimwe zvinhu, nei? Iwo mapurogiramu anotorwa pasi mahara, mamwe mahara zvachose, mamwe anofanirwa kuvhurwa nekodhi. Kuziva maitiro ekuwana a activation kodhi verenga peji racho ►Kutenga Faq.
►Ndarasa kodhi yekushandisa ye software, ndinogona kuikumbira neemail? Iwo ekumisikidza makodhi ari mumhando dzeMhando dzinotengeswa kuAmazon, chikumbiro chinofanirwa kutumirwa chakananga kuAmazon rutsigiro.
►Ndakatora pasi software asi Windows inondinyevera kuti inogona kuva nenjodzi, nei? Zvirongwa zve ThatsLuck vese vakachengeteka uye 100% hutachiona husina, vasina zvitupa zvinodiwa neMicrosoft kuti varege kuratidza yambiro idzi (zvitupa izvi zvinobhadharwa), zvinogona kuitika kuti kutanga kwechirongwa kunoonekwa yambiro inozivikanwawo se "smartscreen".
Mune ino kesi chingobaya pane chinhu "Rumwe ruzivo" uyezve pa "Mhanya zvakadaro".
►Yangu antivirus yakawana Trojan muchirongwa, nei? Sezvakatonyorwa kare, ese mapurogiramu e ThatsLuck vane 100% hutachiona mahara. Nekudaro, kumanikidzwa necompiler inobatanidza zvinoitwa kuti zvideredze saizi uye nekudaro inomhanyisa kurodha pasi, zvinoitika kuti imwe mahara antivirus (kunyanya Avast) inogadzira alarm yekunyepa, ichivharira kana kudzima iyo faira zvachose kubva pakombuta. Mune ino kesi ini ndinokurudzira kushandura iyo antivirus. yakachengeteka, yakasimbiswa uye yakasimbiswa. ThatsLuck.com NON ine Trojans, spyware, mavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukuvadza komputa yako. Ukabaya pane inotevera chinongedzo unogona kutarisa iyo gwaro rekuchengetedza Yakagadzirwa ye ThatsLuck.com dal ►Google Transparency Report.
►After kutanga chirongwa iyi yekukanganisa meseji inowanikwa, nei?
Mapurogiramu ese anoda anoshanda internet kubatana kushanda, uyu meseji kukanganisa 1784 inoratidza kuti network yekubatanidza iri kushaikwa kana kunonoka, kuitarisa uye edza kutanga software zvakare.
►Ndinogona here kushandisa chirongwa pane yangu Mac? Zvirongwa zve ThatsLuck - kunze kwekunge zvataurwa zvimwe - zvakanyorwa se 32/64 zvishoma Windows inobuda. Mhinduro saka hapana, zvisinei ini handigone kusiyanisa kuti kushandisa Windows emulator yeMac vanogona kushanda zvakachengeteka.
► Ndezvipi zvidiki zvinodiwa kuti uite zvirongwa? Ivo ndeaya anotevera: PC ine Windows 7 kana yepamusoro sisitimu yekushandisa, 2 GB yegondohwe, skrini ine mashoma resolution 1366 × 768.
►A roulette chirongwa chandakaburitsa nekumisikidza hachirove sezvazvinofanira patafura yemutambo wekhasino, ndingaigadzirisa sei? Izvi zvinogona kutsamira pazvinhu zvakasiyana siyana, zvisinei mhinduro dzingangoita nguva dzose ndedze kutanga chirongwa "semubati". Kuti uite izvi, ingotinya pafaera rinobatika nekiyi bhatani remouse uye sarudza sarudzo "mhanya semubati". Chimwe chinhu zvakakosha zvikuru ndeyekuti dhairekodhi rechirongwa riripo pakombiyuta uye hauna kumbobvira uri mumudzi weiyo main hard disk (kazhinji C :), uko, semuenzaniso, iyo Windows folda inowanikwawo.
►Ndine makomputa maviri uye laptop, ndinogona here kushandisa chirongwa pane ese maPC angu? Hongu hongu, kana iwe uchida iwe unogona zvakare kuendesa uye woitangisa iyo zvakananga kubva kune USB pendrive paPC yaunoda.
►Handina muverengi wema Kindle ebook, ndingaverenga sei bhuku kuti ndiwane iyo yekubvumidza kodhi? Kana iwe ukashandisa PC kana Mac, unogona kurodha pasi ►App yemahara yeAmazon yako PC / Piritsi / Smartphone zvese iOS uye Android.
Hauna kuwana mhinduro iwe yawaitsvaga? ►Bata neni uye pamusoro pezvose kusaina pamusoro ►YouTube yekutarisa pane software iri kuuya!